Iindaba-Inkqubo yokuHamba kweYunithi yePayipi ePhakamileyo eQhelekileyo
Izixhobo zombane ezihamba ngesinyithi ngombane ikakhulu zibandakanya i-uncoiler, umatshini wentloko ethe tye, umatshini wokulinganisa osebenzayo, ucheba u-welder ugcino, umkhono ophilayo wokugcina, umatshini wokulinganisa, isarha yokubhabha ekhompyutheni, umatshini wentloko wokugaya, umatshini wovavanyo lwe-hydraulic, ukuhla kwe-roller, izixhobo zokufumanisa isiphene, i-baler , Ukuhamba rhoqo kwe-DC, izixhobo zombane ezigcweleyo, njl njl.Iimpawu zombane ophakamileyo ojikeleze iyunithi yombhobho zezi: isantya esiphezulu sewelding, indawo encinci yokutshisa ubushushu kwindawo echaphazelekayo, ukuwelda kwindawo yokusebenza akunakucocwa, umbhobho odongeni odibeneyo, isinyithi esinyibilikayo umbhobho.
Inkqubo yemveliso yentsimbi yombane ohamba ngesantya esiphezulu kakhulu ixhomekeke kwimveliso eyahlukeneyo, ukusuka kwimpahla eluhlaza ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo kufuneka kudluliswe kuthotho lweenkqubo ukugqibezela ezi nkqubo zifuna oomatshini kunye nezixhobo kunye ne-welding, ulawulo lombane, izixhobo zovavanyo, ezi izixhobo kunye nezixhobo ngokungqinelana neemfuno zenkqubo ezahlukeneyo zineendlela ezahlukeneyo zokwenza amalungiselelo, umbhobho osisinyithi osisinyithi oqhelekileyo yinkqubo eqhelekileyo: ukucheba okude -ukutyhila-ukulinganisa umtya-intloko kunye nomsila we-shear-umtya we-butt welding-ukugcinwa komkhono ophilileyo-ukwenza-ukuwelda- ukususwa kwe-burr-ubungakanani-ukufumanisa okungahambi kakuhle
Thatha umatshini wokulawula umbhobho wokuhombisa njengomzekelo, inkqubo yemveliso yezixhobo ikakhulu ibandakanya le miba ilandelayo.
1. Kulayishwa: ngokusebenzisa yokubeka yokubeka iya kubekwa ngokulandelelana ngentsimbi umcu, ngokusebenzisa motor amandla ibambelele transmission intsimbi umcu ukuya icandelo bokwakha, yonke indlela ukuqhubeka.
2.Ndiyila icandelo: i-strip yentsimbi ethe tyaba ngokusebenzisa i-roll die extrusion molding, ukuqala komboniso wentsimbi engenasici.
Icandelo le-Welding: imiphetho emibini yomtya wentsimbi esongwayo, ngomatshini we-welding oshushu obushushu, owaziwa ngokuba yintsimbi yentsimbi.
4.Ukusila icandelo: ubushushu obume bentsimbi engenasici nge-welding yokupholisa amanzi, ukugaya i-stainless steel tube bump bump, ukuphucula ubume be-weld seam.
5. Ukulinganisa kunye nokulungisa: ukujikeleza kwesinyithi esinezixhobo zetyhubhu yokuqhuba ngokufaka iwelding kumaqondo aphezulu obushushu kunye nokupholisa amanzi kuya kuba nesiphene esincinci. Ukulinganisa kunye nokulungisa ngokusebenzisa i-roller, ukuzimisela kokugqibela kokujikeleza okanye ukubala kwesikwere sentsimbi engenasici.
6. Icandelo lokusika: ukusika isarha blade okanye ukusika ngesanti kubunzulu baphantsi, ngokweemfuno ezizodwa zomsebenzisi wombhobho ubude wokusika umbhobho okrelekrele.
7. Cinder umbandela: ngokuthi phantsi kwempahla ebonakalayo, akukho monakalo akukho xinzelelo lokubeka iimveliso ezigqityiweyo.
8. Ukucoca: iimveliso ezigqityiweyo zigqithiselwa kumbhobho wokucoca umbhobho wentsimbi ongenasiphelo kwimveliso egqityiweyo yokupakisha ubunjineli.
9.Ukupakisha: ityhubhu eqaqambileyo yemveliso yokuhombisa ngomatshini wokupakisha okanye ukupakishwa kwencwadi ukuthunyelwa.
Qonda la manqaku ali-9, malunga nenkqubo yemveliso yetyhubhu yolawulo lwesixhobo esenziwe ngentsimbi akukho ngxaki. Iwayini elungileyo ayifuni sihlahla, kodwa ikwasebenzisa indlela eyiyo, kunye nokufumana umenzi olungileyo wokufumana isikhokelo kumntu ngamnye.